Maamulka Aala-Sucuud Oo Xabsiyada u taxaabay Haween iyo Rag, iyo qab-qabasho cusub oo ka billaabatay Xarameynka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maamulka Aala-Sucuud Oo Xabsiyada u taxaabay Haween iyo Rag, iyo qab-qabasho cusub oo ka billaabatay Xarameynka.
On May 19, 2018 214 0
Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu maamulka Aala-Sucuud halkiisa kasii wadaa dhibaateynta dadka muslimiinta ee aan waxba galabsan, kuna sugan dhulka Xarameynka.
Shalay oo Jimco ahayd ayaa ciidamo gaar ah oo katirsan kuwa maamulka Aala-Sucuud waxay qab- qabteen kudhowaad 10 ruux, oo ay ku jiraan haween, kuwaas oo lagala baxay guryahooda, iyagoo dhex jooga ehelkooda.
Dadkan cusub eek u biiraya maxaabiista ku xiran xabsiyada maamulka Aala-Sucuud waxaa kamid ah Ibraahim Muxamed Al-Nafjaan, Ibraahim Cabdi-raxmaan, Muxamed bin Fahad, Sheekha qaari’a ah ee lagu magacaabo Muxamed Al-muxeysani, Cabdil-Caziiz Muxamed iyo labo gabdhood oo lagu kala magacaabo Lajiin Al-hadluul iyo Caziiza Muxamed Al-Yuusuf.
Afhayeen u hadlay ciidanka ilaalada madaxtooyada oo u waramaya wakaaladda wararka ee maamulka Aala-Sucuud ayaa shaaca ka qaaday in dadka la xir xiray ay la shaqeynayaan jihooyin ku sugan dibadda, kuwaas oo doonaya in la qal qal geliyo amniga maamullka Aala-Sucuud.
Afhayeenkan ayaana soo bandhigin cadeymo iyo wax muujinaya eedeymaha rasmiga ah ee loo soo jeediyay dadkan la qab-qabtay, waxaana la rumeysanyahay in arintan ay qeyb ka tahay ol olaha Muxamed bin Salmaan uu wado, kuna doonayo inuu meesha kaga saaro qof kasta oo diidan siyaasadiisa.
Dr Cabdullaahi bin Muxamed Al-muxeysani, oo ku sugan Suuriya, islamarkaana uu dhalay sheekha qaari’a ee la xiray, ayaa bartiisa uu ku leeyahay Telegramka wuxuu kusoo qoray hadal xaqiijinaya In Aabihii xabsiga loo dhaadhiciyay.
Sheekh Muxamed Al-Muxaysani ayaa imaam ka ahaa masjidka Al-raajixi ee magaalada Makkah, waxaana 36 sano kadib uu sheekhu ka maqanyahay salaadihii Taraawiixda oo uu tujin jiray dadka muslimiinta ah.